Maleezhiyaan Weerara Vayirasii Koroonaa biyyattii keessatti hammaate to’achuuf daangaa biyyoota ollaa waliin qabdu hunda cufte - NuuralHudaa
Maleezhiyaan Weerara Vayirasii Koroonaa biyyattii keessatti hammaate to’achuuf daangaa biyyoota ollaa waliin qabdu hunda cufte
Biyyi ollaa Chaayinaa hanga Jalqaba ji’a kanaatti weerara Vayirasii Koronaa biyyoota naannichaa cinqaa ture to’achuu isiitiin dinqisiifamaa turte. Haata’u malee Konfiransii Da’awaa guddaa xumura ji’a dabree geggeeffame booda Vayirasichi haala weerararaatiin kan tatamsa’e tahuu mootummaan biyyattii beeksise. Konfiransiin kun Masjiida guddaa magaalaa Kuwalaalaampur keessatti guyyaa 4 kan geggeeffame yoo tahu, lammiilee biyyoota alaa 1,500 dabalatee ummanni kuma 16 konfirasicha irratti kan hirmaatee ture tahuu gabaafame.
Biyyoonni Islaamaa Vayirasichi haala yaaddeessaa taheen keessatti babal’ataa jiru kanneen biroo, hanga guyyaa har’aatti Qaxar Namni 450, Indoneezhiyaa Namni 309, Pakistaan Namni 307, Bahreeyn Namni 256, akkasumas Sa’uudiin Namni 238 qabamuu mirkaneessanii jiru.
Biyoota islaamaa keesaa Namooni Lubuun darbe ni jirru hanga amma
Fayyisaa Shaalloo says:
Inshaallaah rabbi nuuf haa birmatu
مَكِّيَّةٌ بِنْت طَه says:
Rabin rahamataa haa godhuu Inshaallaah
shamil muktar says:
nural hudaa barumsaa hedduu irraa fudhata jiraa itti jabadhaa
seyfden mohammed says:
jabadha odeefannoo dhugaa ummata muslimaa biraa ga’aati bala gudda dhukkuba korona kana jala ummata keenya barara? As,wr,wa
Bilisumma Ahmad says:
As wr wb jabaadhaa warra NH da’awaan keessan bifa barreeffamaan osoo ta’ee baay’ee nutti tola jabaadhaa rabbii jecha isin jaalanna.
October 16, 2021 sa;aa 5:33 pm Update tahe